थाहै नपाई गुम्न सक्छ मिर्गौला (कारण पढ्नुहोस ) « Himal Post | Online News Revolution
थाहै नपाई गुम्न सक्छ मिर्गौला (कारण पढ्नुहोस )
प्रकाशित मिति : २०७३, ६ भाद्र १५:२५
सामान्य लक्षण देखिए पनि ओछ्यान नपर्दासम्म ‘मलाई केही भएको छैन’ भन्दै ढुक्क हुनेहरू जब एक्कासी रोगले च्यापेपछि मृगौलाले काम गर्न छोडिसकेको चाल पाउँछन् तब उनीहरूसँग पछुताउनुको विकल्प रहन्न । जीवनका प्रत्येक दिनलाई पैसासँग साटेर औषधिको भरमा टिकाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । शरीरको महत्वपूर्ण अङ्ग मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि उपचार जति महँगो र झन्झटिलो छ त्यो भन्दा धेरै गुणा सजिलो छ यसको पहिचान र समयमै उपचार ।
सामान्य परीक्षणले मृगौलाको अवस्था थाहा हुने र समयमै उपचार सजिलो भए पनि मृगौला रोगीको सङ्ख्या भने दिनानुदिन बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार संसारभर १० प्रतिशत मानिस मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट ग्रस्त छन् । सोही आँकडालाई आधार मान्ने हो भने, नेपालमा पनि करिब २७ लाखलाई मृगौला सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ७० हजारको मृगौला बिग्रिने गरेको छ भने प्रत्येक वर्ष दुई हजार सात सयको मृगौला पूर्ण रूपमा फेल हुन्छ ।
मृगौलाले विकारहरूलाई पिसाबको माध्यमबाट फाल्छ भने, लवणहरू सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, फोस्फोरस जस्ता तत्वलाई मिलाउने काम गर्दछ । जुन हाम्रो शरीरका प्रत्येक कोषका लागि महत्वपूर्ण छ । चिकित्सकहरूका अनुसार शरीरका दुईवटा मृगौलाले संयुक्त रूपमा दिनभरमा लगभग १८० लिटरभन्दा बढी रगत फिल्टर गर्ने काम गर्छन् । त्यसमध्ये डेढदेखि दुई लिटर मात्रै पिसाबका रूपमा बाहिर फाल्ने काम हुन्छ र बाँकी १७८ लिटर रगत तथा पानीले शरीरमै फैलाउँछ । डा. बरालका अनुसार यो दरमा काम गर्न सकेन भने मृगौलामा समस्या देखिन थाल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘मृगौलाले रगत छान्दा वा फिल्टर गर्दा जति विकार उत्पादन हुन्छ उक्त विकार पिसाबका मध्यमबाट बाहिर पठाउने काम गर्दछ ।’
चिकित्सकहरूका अनुसार मृगौलामा समस्या देखिने मुख्यतः दुई कारण छन् । एउटा मृगौला आफैँभित्रको समस्या र अर्को शरीरका अन्य अङ्गमा लागेका रोगहरूका कारण । राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रका निर्देशक समेत रहेका डा. काफ्ले भन्छन्, ‘मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, कलेजो, बिग्रेको अवस्थामा पनि मृगौलामा असर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यस्तै मृगौलाको पत्थरी, ट्युमर, क्यान्सरजस्ता सर्जिकल समस्याले पनि मृगौला बिगार्न सक्छ । ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस्, पोलिसिस्टिक किड्नी डिजिज अर्थात् पानीको फोका देखिने रोगले पनि मृगौला खराब गर्छ ।’
डा. बरालले मृगौला रोगीको उपचारका क्रममा बटुलेको अनुभव सुनाए, ‘जन्मजात हुने समस्या, वंशाणुगत रोगको समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बाथ तथा नसाका रोगहरू, मुटु, फोक्सो कलेजोमा हुने विभिन्न रोगहरूका कारण पनि मृगौलामा समस्या आउँछ ।’ शरीरको सञ्चालन प्रक्रिया मृगौलाबिना सम्भव नै नहुने भएकाले समस्या देखिनासाथ उपचार खोजिहाल्नुपर्छ । मृगौलाले काम गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ मेसिनको सहायतामा मृगौलाको काम गराउने पद्धति डाइलासिस वा मृगौलाको प्रत्यारोपणको विकल्प रहन्न ।
चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘वर्षमा एकपटक मृगौलाको जाँच गर्नु अनिवार्य छ ।’ त्यसबाहेक मृगौलालाई चाहिने आवश्यक मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्दछ । एक व्यक्तिले सामान्यतः दैनिक अढाईदेखि तीन लिटरसम्म पिसाब हुनेगरी पानी पिउन डा. शाहको सल्लाह छ ।
हेरिडिटरी डिजिजेज : जसलाई हामी ‘अल्पोट सिन्ड्रम’ पनि भन्छौ । जसका कारण बच्चाहरूले कान कम सुन्ने, आँखाको खराबी र मृगौलाको रोगहरू आउन सक्छ । फ्यावरिज डिजिज ः यसलाई वंषाणुगत रोगका रूपमा चिनिन्छ । जसले मृगौलामा असर गर्न सक्छ । बच्चाको शरीरको विकाससँगै मृगौला खराब हुने रोगलाई फ्यावरेव डिजिज भन्दछौँ ।
मृगौलामा पानीको फोकाहरू हुने रोगः यो पनि जन्मजात आउने रोग हो । यो दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा बच्चामा हुन्छ, जसलाई हामी ‘एआर पीकेडी’ (अटोजोमल रिसेसिभ पोलिसेस्टिक किड्नी डिजिज) भन्छौँ । यस्ता रोगीको प्रायः वयस्कसम्म पुग्न नपाउँदैन बच्चा अवस्थामै मृत्यु हुन्छ । अर्को चाहिँ, वयस्कहरूमा हुने ‘अटोजोमल डोमिन्याट् पोलिसेस्टिक किड्नी डिजिज’ । यो वंशाणुगत समस्या हो र हरेक पुस्तामा अर्थात् बुबा–आमा वा हजुरबा–हजुरआमालाई छ भने तिनका सन्ततिलाई समेत मृगौला रोग हुन सक्ने सम्भावना ५० प्रतिशतसम्म रहन्छ । यसले साधारणतया ४० देखि ५० वर्षका मानिसको किड्नी फेल गराउँछ । पानीको फोकाको उपचार हुँदैन र नयाँ मृगौला प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ ।
एक्वाएर्ड किड्नी डिजिज : जन्मदै साधारण देखिने मृगौलामा पनि रोगहरू आउन सक्छन् । यसमा कतिपय मृगौला भित्रैबाट आउने रोगहरू छन् । त्यसमध्ये ‘ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस’ एउटा प्रमुख रोग हो ।
मृगौलाले एक दिनमा एक सय ८० लिटर रगत तथा पानी फिल्टर गर्नुपर्छ, त्यो फिल्टर गर्ने अङ्गको नाम ‘ग्लोमरुलो’ हो । ‘नेफ्रोन’ जुन भागमा हुन्छ त्यस भागको महत्वपूर्ण भागलाई ग्लोमरुलो भनिन्छ । त्यसको कुनै भाग ड्यामेज भयो भने त्यसले ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस हुन्छ ।
ग्लोमरुलो नेफ्राइटिसले पिसाबमा प्रोटिन जाने, रगत देखिने, सेता रक्तकोष देखिने खाले समस्या निम्त्याउँछ । त्यसपछि अनुहार तथा पूरै शरीर नै सुन्निने भएर बिरामीहरू अस्पताल पुग्छन् । यसको पहिचान गर्नका लागि मृगौलाको ‘बायप्सी’ गर्नुपर्छ । बायप्सीपछि मात्रै रोग पत्ता लाग्न सक्छ । समयमै उपचार भयो भने मृगौला फेल हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस मृगौलाकै कारणले पनि हुन सक्छ भने अन्य रोगका कारणले पनि । बाथ रोग र क्यान्सरले पनि यस्तो समस्या निम्त्याउँन सक्छ । त्यस्तै, मृगौलामा ‘सेकेन्डरी ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस’ भयो भने पनि समस्या देखिन सक्छ । औषधि र संक्रमणका कारण यस्तो हुन सक्छ ।
मधुमेह र उच्च रक्तचाप : मधुमेह भएका सबै रोगीको मृगौलामा असर पुग्दैन । मधुमेह पनि दुई प्रकारका हुन्छन् । टाइप–१ र टाइप–२ । शरीरमा इन्सुलिन नभएका बच्चामा टाइप–१ मधुमेह देखिन्छ । टाइप–२ वयस्कमा हुन्छ । त्यसमा चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा बढी हुन्छ । यस्ता बिरामीलाई मधुमेह भएको १० देखि २० वर्षभित्र मृगौलामा ४० देखि ५० प्रतिशत असर गरिसकेको हुन्छ । जसलाई ‘डायबिटिक नेफ्रोप्याथी’ भनिन्छ अर्थात् डायबिटिजले हुने मृगौलाको रोग ।